၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အထိ မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်သို့ သက်မဲ့ခန္ဓာ လှူဒါန်းသူ ၃ဝ၅ ဦးရှိ သက်မဲ့ခန - Yangon Media Group
၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အထိ မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်သို့ သက်မဲ့ခန္ဓာ လှူဒါန်းသူ ၃ဝ၅ ဦးရှိ သက်မဲ့ခန
မကွေး၊ ဇွန် ၂
မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများ လေ့လာသင်ကြားနိုင်ရန်အတွက် အသက်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်လှူဒါန်းသူ ၃ဝ၅ဦးရှိပြီး ခန္ဓာကိုယ်အလှူရှင်များ လိုအပ်နေသေးကြောင်း မကွေးဆေးတက္ကသိုလ် ခန္ဓာဗေဒဌာနမှသိရသည်။ မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်၌ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ သက်မဲ့ခန္ဓာ ကိုယ်လှူဒါန်းမှုများကိုလက်ခံခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၂ခုနှစ်တွင်လေးဦး ၊ ၂ဝ၁၃ ခု နှစ်တွင်လေးဦး ၊ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် ခုနှစ်ဦး ၊ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ၁၂ဦး၊ ၂ဝ၁၆ ခုနှစ်တွင်၂၂ ဦး ၊၂ဝ၁၇ ခုနှစ် တွင် ၃၂ ဦး ၊ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်တွင် ၁၅၁ ဦး ၊ ၂ဝ၁၉ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှ မေလ ၃ဝ ရက်ထိ ၇၃ ဦး စုစုပေါင်း ၃ဝ၅ ဦးရှိကြောင်းသိရသည်။
”ကျွန်မတို့ မန္တလေးဆေး ကျောင်းတက်တုန်းကတော့ ကျောင်းသား ၁ဝ ဦးကို ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခု လေ့လာခွင့်ရတယ်။ အခုမကွေးဆေး တက္ကသိုလ်မှာတော့ အုပ်စုရှစ်စု ခွဲပြီးတော့ ကျောင်းသား ၃၅ ဦး ပါဝင်တဲ့ အုပ်စုတစ်ခုကိုမှ ခန္ဓာ ကိုယ်တစ်ခုပဲ လေ့လာခွင့်ရတယ်။လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေသေးတာပေါ့။ ဒီနှစ်မှာပညာသင်ကြားနေတာက ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူ ၂၈၆ ဦး ရှိပါတယ်”ဟု ဆေးတက္ကသိုလ် (မ ကွေး)၊ ခန္ဓာဗေဒဌာနမှ ကထိက ဒေါက်တာဥမ္မာလှိုင်က ပြောသည်။
ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများသည် ဆေးတက္ကသိုလ် ဒုတိယနှစ် ၌ ရောဂါမရှိသောသူများ၏ သေဆုံးခန္ဓာကိုယ်များကို လေ့လာကြရပြီး တတိယနှစ်တွင် ရောဂါဖြင့် သေဆုံးသည့် ခန္ဓာကိုယ်များကို လေ့လာကြရသည်။ ယခုနောက်ပိုင်းတွင် လူသိများလာ၍ သက်မဲ့ ခန္ဓာကိုယ် လှူဒါန်းမှုများလာသော်လည်း လိုအပ်ချက်များရှိနေသည့်အတွက် သဒ္ဓါတရားထက်သန်သူများကို ဖိတ်ခေါ်နေလျက်ရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်လှူဒါန်းမှုများ အ နေဖြင့် မကွေးဆေးတက္ကသိုလ်၊ ခန္ဓာဗေဒဌာနပါမောက္ခ သစ္စာအေး မောင်သန်းဖုန်း-ဝ၉-၅ဝ၃ ၉ဝ၂၇၊ ဒေါက်တာမို့မို့လွင် (ကထိက) ဖုန်း-ဝ၉၂၅၆၁၅၁၅၁၅ ၊ ဒေါက် တာဥမ္မာလှိုင်(ကထိက) တို့ထံ ဆက်သွယ်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
မြဝတီမြို့မှ သတင်းထောက်များအား အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုနေမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကန့်ကွက်ရှုတ်ချပွ?
ရာသီဥတု ပူပြင်းမှုကြောင့် အပူလျှပ်လူနာ ၅ဝ ကျော်ရှိခဲ့သည့် မန္တလေးတွင် ယခုအခါအပူဒဏ် ခံစားရမှု ?
မြောက် မက်ဆီဒိုးနီးယားနိုင်ငံ၏ တောင်ဘက်ပိုင်းရှိ ဂရိ နယ်စပ်အား မျက်ခြည်မပြတ် စစ်ဆေးနေဟြုေ
စစ်ကိုင်းမြို့နယ် စည်ပင်ပိုင် လုပ်ငန်းလိုင်စင်များကို ဈေးပြိုင်စနစ်ဖြင့် လေလံတင်ရောင်းချရာ လုပ်ငန်း ၃၀ မှ ကျပ်ငွေ သိန်း ၅၆၀ဝ ကျော်ဖိုး ရောင်းချရ